Shuangye 129th Bandhigga Canton Online
Bogga ugu weyn blog News Kusoo dhawow Shuangye 129th Online Canton Fair
Taariikhda ： 2021-04-01 Qeybaha ：News Muuqaalada ： 1,282 aragti
Carwadda 129-aad ee Kanton waxaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah bisha Abriil
Kalfadhiga 129aad ee Canton Fair (Shiinaha Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Carwada) ayaa lagu sii wadi doonaa khadka tooska ah iyada oo lagu jiro xakameynta cudurrada faafa. Baaskiilka korantada ee Shuangye (Hotebike) wuxuu ku martiqaadayaa dadka xiiseynaya baaskiil koronto ama mootada korantada, iyo macaamiishayada wada shaqeynta inay ogaadaan wax badan oo naga mid ah oo si qoto dheer u qulqulaya barxaddan. Haddii aad xiisaynayso nooc kasta oo baaskiil koronto ku shaqeeya, fadlan farriin noogu reeb. Marka Carwadda 129-aad ee Kanton waxaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah laga bilaabo Abriil 15-keeda ilaa 24-keeda muddo 10 maalmood ah.
Shuangye baaskiil koronto koronto Canton Fair Homepage isku xira ：https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-0d4c-08d7ed7a1bdb/
Baaskiilada korantada ee Shuangye Xiriirinta tooska ah ee baahinta tooska ah ：https://ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254-0d4c-08d7ed7a1bdb/live
Shuangye (Hotebike) waxaa la aasaasay 2006 waxayna leeyihiin 14 sano oo khibrad soo saarista baaskiil koronto ah OEM & ODM. Oo waxay ku taallay magaalada xeebta quruxda badan ee Zhuhai, Shiinaha (Dhul Weyn). Shirkadda Shuangye waxay ku qalabeysan tahay xarumo taxane ah oo casri ah oo qumman, iyada oo noo oggolaaneysa inaan soo saarno oo aan horumarinno batteriga, mootada, kantaroole, xeedho, jir, xarun iyo daaweynta dusha qeybahan muhiimka ah. Alaabtayada ugu muhiimsan waa baaskiil koronto, baaskiil buur koronto leh, isku laabashada baaskiil koronto, xirmo beddelaad baaskiil koronto iyo batariga baaskiil koronto. Waxaan sidoo kale leenahay koox xirfadlayaal ah R & D iyo koox iibin heer sare ah si ay u siiyaan wax soo iibsade wax soo saar tayo sare leh iyo adeeg. Dhammaan alaabooyinka si madax bannaan ayaa loo baaray loona horumariyey waxayna leeyihiin waxqabad deggan iyo qiimo jaban. Shuangye wuxuu had iyo jeer ku dhegan yahay fikirka ah "daacadnimo, feejignaan, degganaansho iyo hal-abuurnimo", oo ku aaddan adeeggaaga u heellan. Waxaan kugu sugi doonnaa Carwadda 129-aad ee Kanton oo waxaan rajeyneynaa inaan ganacsi kula yeelano bogga internetka ee Carwada.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan baaskiil koronto, fadlan booqo annaga Websiteka rasmiga ah or nala soo xiriir si xor ah.
Ka hor: Ku soo dhowow Carwada Shuangye Online Hong Kong
Next: Miyay ebikeedu yihiin mustaqbalka kireysiga baaskiil la'aanta dadweynaha?